Ọ bụrụ n’inwee ụdị zuru ezu nke ikpe akwụ ụgwọ, ịnwere ike ịnwe Terraria 1.3 | Gam akporosis
Etu ị ga - esi nweta Terraria ohuru ma ọ bụrụ na ị zụtara akụkụ zuru oke site na ikpe ya na micropayment
Terraria emelitere na nsụgharị 1.3 na ụdị akwụ ụgwọ ma ọ bụ nke dị adị na Storelọ Ahịa Play. Naanị ihe na-eme na ndị na-e zụtara Terraria na ya zuru mbipute site ikpe na micropayment, ugbu a ha amaghi ihe ha g’eme.
Anyị ga-egosi gị otu esi enweta nsụgharị ọhụrụ nke Terraria site na ụdị ikpe ahụ, ya mere na ị gaghị akwụ ụgwọ ọ bụla ọzọ ma si otú a gbanwee micropayment ahụ n’ime 1.3 nke ga-adịzi naanị ụdịdị dị na thelọ Ahịa Google.
A sị na taa ya na mmelite ohuruNdị anyị zụtara akwụkwọ zuru ezu n'oge ahụ site na nsụgharị ụkwụ, ha ga-ihu bọtịnụ "tọghatara" nke ahụ ga - eduga anyị na ntinye na nnweta n'efu nke ụdị ọhụrụ na pụrụ iche.
Naanị nke ahụ mkpọchi ahụ anaghị arụ ọrụ n’oge ahụ na dị ka ha na-ekwu si Terraria forums, ọ ga-abụ okwu nke a awa ole na ole na oge nke ọ nọ n'ọrụ. O yiri ka nsogbu ụfọdụ amalitegoro ọ dị mkpa idozi. Iji mee ka o doo anya, anyị na-agụta otu okwu sitere na otu Terraria:
Ndị nwere ụdị ikpe nke gam akporo ma nweta nsụgharị zuru ezu n'ime ngwa ahụ, ọ ga-ghọrọ ka zuru version na ị ga-enweta update.
Ndị naanị ndị nwere ikpe ikpe nke gam akporo agaghị enweta mmelite ahụ ma a ga-akpọrọ ha ịzụta zuru mbipute sitere na ụlọ ahịa gam akporo.
Agaghị enwe ụdị nnwale na ụlọ ahịa ahụ ma ewepụ ya na fromlọ Ahịa Play
Echere m, ihe ma ọ bụrụ na ị nwere mbipụta ikpe na micropayment emere site na mbipute zuru ezu, gbalịa ịmalite egwuregwu ahụ iji chọta bọtịnụ ahụ ga-akpọrọ gị na ntughari. Yabụ ịnwere ike ịnweta ụdị Terraria ọhụụ site na nnwale ma nwee ọ newsụ na akụkọ ya niile.
Developer: Egwuregwu 505 Srl
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Egwuregwu gam akporo » Etu ị ga - esi nweta Terraria ohuru ma ọ bụrụ na ị zụtara akụkụ zuru oke site na ikpe ya na micropayment
Ndi ana-akpo Google na enye anyi ohere igbanwe n'etiti ihe omuma site na ogbughari
Google na-arụ ọrụ na ọgbọ nke abụọ nke Google Mini